Ndakaedza Kubuntu 15.04 Beta2 uye ndinokusiira maonero angu;) | Kubva kuLinux
Ndakaedza Kubuntu 15.04 Beta2 uye ndinokusiira maonero angu;)
Mazuva mashoma apfuura iyo Beta 2 yezvinozove ** Kubuntu 15.04 ** yakabuda uye yakasiya yakanakisa kuravira mumuromo mangu mushure memaminetsi mashoma ekuyedzwa. Ngatitarisei zvimwe zvezvinhu zvinonakidza kusangana neBeta iyi.
1 Simba re KDE
2 Zvimwe zvinonakidza zveKubuntu 15.04
3 Kubuntu 15.04 Mhedziso
Simba re KDE
Pamwe chinonyanya kukosha shanduko iyo ** Kubuntu 15.04 ** yatinounzira ndeyekuti vanoisa parutivi kuchengetedzeka uye kugadzikana kwe KDE 4.X kuvhura maoko avo ku ** Plasma 5 **. Ini handirangarire kuti ndeipi vhezheni yeKubuntu yakauya neKDE 4.0 kekutanga, asi chandisingazombokanganwa ndechekuti yaive njodzi yakazara nekuda kwekusagadzikana kwedesktop panguva iyoyo.
Na ** Plasma 5 **, kunyangwe isu tichigara takatarisana nechimwe chinhu chakafanana, ini handifunge kuti yakafanana nenguva iyoyo. Avo vedu vanga vachiedza ** Plasma 5 ** kubva payakatangwa takaona kukura kwayakaita zvishoma nezvishoma uye ruzivo rwuchiri kunyatsoshomeka idiki kwazvo. Zvichida zvinonyanya kutsamwisa ndezvekuti mamwe maficha akaita sePidgin, usaratidze icon iri mutray system. Asi pasina kupokana zvimwe zvezvakanakira uye kugadzirisa izvo ** Plasma 5 ** zvinotisvitsa mukati ** Kubuntu 15.04 ** zvinoita kuti tikanganwe izvo zvinhu.
Sezvo tasvika pa * Login * skrini, tinogona kuona kutarisika kwekuyemura kwakaitwa nevagadziri ve KDE nekuda kweiyo Nyowani * Team * inotarisira mufananidzo uye dhizaini yeiyi Desktop Nharaunda. Chimiro chimwe chete icho chatinowana pane yekuvhara skrini:
Kana uchiwana iyo Desktop ini ndinofunga chinhu chekutanga chatichacherekedza ndechekuti "minimalist" iri sei, uye pasina kupokana inoratidzika kunge yakanaka, kunyangwe yekuravira kwemavara. Muenzaniso weiyi ndeye KDE Menyu yekunyorera iri sober, yakashongedzwa uye chaizvo * yakati sandara *.
Uye kune avo vanofarira madema matema muPlasma, nekuti * Breeze * (iyo nyowani theme yeDesktop), inotipawo iyo ye * Rima * vhezheni:
Imwe tsananguro yandaifarira nezve * Live CD * yeiyi Beta ndeyekuti ivo vakango sanganisira anodikanwa eGTK kunyorera, mune ino kesi ** LibreOffice ** uye ** Mozilla Firefox **. Uye zvakare, iyo default font ndeye ** Oxygen Font **, font yakagadzirirwa chaizvo KDE, kunyangwe iyo isinganyatso kundibvumidza neiyo system yekumisikidza * anti-aliasing *, uye ini ndinogara ndichiguma ndichiisa imwe. Vakawedzera zvakare ku KDE Preferences Center, iyo sarudzo yekuona data reboka redu:
Kudzokera ku ** Plasma 5 ** uye zvitsva zvayo, ikozvino * applet * inosanganisirwa mupaneru kudzora vatambi vemhanzi:
Uye mune iyo ** Kubuntu 15.04 **, imwe * applet * inowedzerwa kuvhura KDE Telepathy iyo inobatsira chaizvo:
Kune rimwe divi mu ** Plasma 5 ** ivo vatora (mumaonero angu) nhanho yekumashure nekubatanidza zviyeuchidzo zvinoyerera muchimiro chemabhuru, izvo zvisinga gadziriswe zvachose. Idzi kana dzangonyangarika dzinogona kuratidzwa pane ipanhi senguva dzose.
Ini ndinoti idanho rekudzokera kumashure nekuti neKDE4, unogona * kubvisa * zviyeuchidzo kubva kupaneru uye vanopihwa chimiro chimwe chete (mune bubble), asi isu tine sarudzo yekuzviita kana kwete. Chero nzira, vanotaridzika chaizvo.
Zvimwe zvinonakidza zveKubuntu 15.04
Kuedza iyo * LiveCD * Ndakawana zvimwe zvimwe zvandakawana zvinonakidza, senge ** Kubuntu inosanganisira itsva GTK theme inonzi Orion ** iyo ine misiyano yayo yeGTK2 neGKT3 kunyorera. Zvakare, inowedzera mutsva graphical maitiro eKDE anonzi * Fusion *.
Chimwe chinhu chakabata pfungwa dzangu ndechekuti pandakanga ndichinyora mu ** Kate **, ndakanga ndabuda. Pandakadzoka mukati ndakavhura ** Kate ** zvakare ndakarega basa kuti ndakanga ndatora akawanda manotsi uye ndisina kusevha, asi ndakaona izvi:
Kwete chete iyo yaindibvumidza ini kuona Pamberi / Mushure mekuchinja, asi zvakanditendera kuyeuka zvandakanga ndanyora, kana ini ndaigona kukanganwa nezvazvo. Unofungei? Dai izvi zvaive zvatovepo kare, ndaingove nazvo zvekuseni breakfast
Sezvauri kuona mune iyo skrini, pakati pezvinyorwa zvandakanga ndichinongedzera se * chimwe chinhu chisina kunaka mune ino beta *, ndeyekuti LibreOffice inoda rudo rwakati wandei sezvo kusangana neKDE hakuna kushata zvachose, asi mumenu isu ziva patinomira pane imwe sarudzo.
Uye kupedzisa chikamu ichi, ndinofanira kubvuma zvimwe zvinhu zvinofanirwa kukosheswa. Kutanga, kuti kunyangwe hazvo kumwe kugovera kwachinja nzvimbo yepamusoro yezvigadzirwa kuita * / run / media / user / device / *, Kubuntu inochengeta iyo mount point pa * / media / user / device / *. Imwe yekuwedzera poindi ndeyekuti inosanganisira KDE Unganidzo yekudyidzana nesystem yedu kuburikidza nefoni yeApple.
Kubuntu 15.04 Mhedziso
Kunyangwe iri pfupi nguva yekuyedza, ndinofunga ** Kubuntu 15.04 ** yakagadzirira uye yakagadzirira kugamuchira ** Plasma 5 **. Mushure meKaOS, izvozvi Kubuntu 15.04 ichave iri * pro Plasma5 * kugovera kwandingakurudzira kune chero shamwari. Parizvino, ini ndichamirira iyo yekupedzisira vhezheni kuti iedze zvakare uye ndione kana ndiri pachokwadi nemaonero angu.
Zvisinei hazvo zvakanakisa zvaungaite kuzviedza iwe pachako, saka ndinosiya iyi link yekurodha pasi:
Dhawunirodha Kubuntu 15.04 Beta 2
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Ndakaedza Kubuntu 15.04 Beta2 uye ndinokusiira maonero angu;)
Obi-Wan Kenobi akadaro
Inonakidza. Tichaona muna Kubvumbi panogadzikwa vhezheni yacho.
PS: 15.04 ndeye LTS? Ini ndaifunga kuti ndiwo mapara, 14.04, 16.04, nezvimwe ...
Pindura kuna Obi-Wan Kenobi
Kwete ini mudiwa.
Ivo vaviri, asi neiyo XX.04.
Ndine hurombo. Kusanzwisiswa kwangu.
Kugadziriswa kudiki kana iwe uchida:
«Zvisinei nenguva pfupi yekuyedza, ndinotenda kuti Kubuntu 15.04 yakagadzirira uye yakagadzirira kugamuchira Plasma 5. Kuva kuburitswa kweLTS tinofanirwa kuve nezvimedu kana chengetedzo uye kugadzikana kwekugadziriswa, asi pachezvayo iyi vhezheni yeKDE inoshandiswa zvizere."
Kune ruzivo rwangu, hazvienderane nekusunungurwa kweLTS. LTS inobuda makore maviri ese, iyo yazvino ndeye 2 LTS, uye inotevera ichave iri 14.04 LTS. https://wiki.ubuntu.com/LTS
Ikozvino, zvine chekuita nemuedzo: chokwadi ndechekuti iyo distro inonakidza, ini ndinofarira kuonekera kwese kwairi kugamuchira. Tichafanirwa kuzviedza 🙂
Ah chaipo .. Ndine pfungwa yekuti ese .04s aive LTS: D. Kutenda nekugadziriswa, izvozvi ndinozvigadzirisa.
Ini ndoda kuyedza yekupedzisira vhezheni, pandinoyedza kuyedza iyi beta palaptop yangu kana ndikafambisa mahwindo anotanga kutsakatika kana kubwaira kana kuvhara, zvinosvota chaizvo, ndinovimba yekupedzisira iri kushandiswa kwandiri, ndichaedza muna Kubvumbi. .
Ndeipi kadhi revhidhiyo rine laptop yako?
Laptop iyo yandinoyedza kugoverwa ine AMD Radeon 7310 HD, panguva ino iri neAntergos uye gnome inofamba kazhinji zvakanaka.
Izvo zvakaitika kwandiri ne14.10 uye plasma 5 ... ndakaigadzirisa nekumisikidza iyo yakagadzikana AMD mutyairi. Zvino muna 15.04 ndakanga ndisisade.
Ini pachangu, ini ndinofunga kuti iyi vhezheni, kunyangwe ichiri beta, ndiyo yakashanda zvakanakisa pane yangu yazvino laptop (uye iyo ini ndakagadzirisa kubva pana 14.10). Inokurumidza, inoyevedza, yakagadzikana ... chokwadi ... ndinochida zvakanyanya. Ini ndaingova nematambudziko akati wandei nemaapplication akabviswa hafu, uye kmix yaingozoitika pakutanga system. Ndakagadzirisa izvo, zvese zvakakwana! uye rutsigiro rwemitauro, ndizvo zvandakarasikirwa zvakanyanya mu14.10 alpha Plasma 5.
Mhoro .. uye mubvunzo wemamirioni emadhora Ndingaite sei kuti Compiz Fusion ishande?
Compiz Fusion pane KDE? Izvo hazvidiwe .. 😉
Chicxulub Kukulkan akadaro
Hazvina kukosha nekuti KWin? Hazvina basa here nekuti Compiz yatopera basa? Hazvidiwe here nekuti Compiz haibatsire kugadzirwa? ...
Mibvunzo ine chinangwa chakanaka, ini ndinojekesa 🙂.
Pindura Chicxulub Kukulkan
Iyo compiz cube yakanyanya kunaka kupfuura kwin's 🙂
Zvakanaka, ini handidi Plasma 5, ndakambozviedza paKaos, Manjaro, Kubuntu uye Arch uye hazvindibvumidze. Masosi anotaridzika kunge akaipa, anondipedza zvakanyanya kupfuura muKde4, inopunzika kakawanda, inotanga ne sddm ichinonoka seyeKdm uye mune zvakajairika zvinoita senge Kde 4 kumeso kupfuura chero chinhu chipi zvacho. Kana Kde 4 yakagadzikana, yakavimbika uye yakachengeteka, wadii kungoita kusimudzira nemifananidzo mitsva, madingindira matsva nekuvandudza mashandisiro asina kubatwa kwenguva yakareba saAmarok kana Konqueror, nezvimwe?
Plasma 5 inoenda kure kupfuura kusimudza kumeso ..
Zvakanaka, iwe une matambudziko iwayo pamberi pekupedzisira kugadzirisa plasma 5.2.2, iyo ichangobva kugadziriswa, haichisiri kukiya uye inoshanda chaizvo. Haisi kusimudza kumeso sezvo iri qt5, gondohwe rinoshandiswa rakaenzana neplasma desktop 4 anenge 400 megabytes. Amarok? asi kana isina chekuita nedesktop. o_O
Yakakwana kuti ivo vakazvigadzirisa asi kwandiri ini ndiri kumirira kusvikira zhizha kuti ndirishandise, mumaonero angu richiri rakasvibira kwazvo, rinondiyeuchidza nezveGnome 3 payakabuda, izere notupukanana.
Ndataura nezve Amarok nekuti mamwe maKde mafomu akasiiwa kwenguva yakareba, ndinofunga aifanira kunge akaiswa kare nezvikumbiro izvi pane desktop.
Kana KDE 4 yakakwenenzverwa, chingave zano rakanaka kurega kuishandisa, handiti? pamwe kwenguva yakati.
Inguva yakareba sei KDE 4 inotsigirwa?
Ini handina kushandisa KDE kwenguva yakareba asi chokwadi ndechekuti ivo vakaipa yakanaka kumanikidza kumeso padanho rekushongedza. Mune mawonero angu yakawana mapoinzi mazhinji neiyi, yanga ichitora nguva.
Adolfo Rojas G. akadaro
Kubva 2012 pandakachinja kubva kuGnome uye / kana zvigadzirwa (sinamoni) kuenda kuXfce, ndinonzwa kusununguka nemamiriro ekupedzisira aya (kunyanya neshanduro itsva 4.12 iyo yatosangana nezvose zvandinotarisira) asi ivo vanotaura zvakanyanya nezve KDE kuti ndizvo kutondipa sezvandiri kuda kuyedza kuti ndibvise kuda kuziva ...
Pindura Adolfo Rojas G
Chinhu chega chinonditadzisa kuenda kuLinux inyaya yebhatiri muWindows inondipedza maawa matatu muLinux ndinovimba mushure mekugadzirisa kwakawanda awa nehafu = /
Ugo Yak akadaro
Ndakaona kuita kwakanaka neUbuntu Gnome.
Pindura Ugo Yak
kumusoro, kuderera kukundikana, ndanga ndichireva "Ubuntu MATE" ^ ^ (Ini handina kuyedza Gnome).
Iwe unofanirwa kuisa iyo TLP kudzikisa mashandisirwo…. Shandisa iyo PPA uye mune jiffy iwe unayo yaiswa. Haisi chishamiso, asi inokwanisa kudzikisa kudyiwa nepakati pe10 kusvika 20%.
Bhatiri rangu rinotora maawa matanhatu approx.
Gadzirisa iyo nekutevera aya matanho:
Ndiri kunzwa sekunge ndinofanira kusiya gnome ndoenda ku kde, kune rumwe runyorwa rwezvirongwa zvirimo nekutadza
Ini handina basa nekuti iyi ndiyo yekutanga KDE 5 kuitisa zviri pamutemo pane kubuntu, asi ini handizive kana zvakakodzera kusiya LTS. Ini ndichamirira kuongororwa kwekutanga mune isingasviki mwedzi mumwe, ndakaiyedza mumushini chaiwo uye inodya gondohwe pakukwirira kweGnome approx 1mb asi inofamba mushe.
OFFTOPIC: Pane chero munhu anoziva nezve chero vatambi vezwi vasiri izvo zvinosemesa seamarok / clementine mu KDE? Ini ndinoda nyama yakafa asi iri GTK…
Vatambi vemimhanzi pane miriyoni. Kana ichifanira kuve QT, saka ini ndaizoenda kuTomahawk kana YaRock. Ivo vane zvavanokanganisa, asi ivo vakanaka kwazvo.
Edza Cantata, uzere kwazvo uye uchishandisa zvishoma zviwanikwa kupfuura Amarok kana Clementine.
uye chii chinofanira kuva GTK?
Pindura kune migurl
Yakanaka chinyorwa. Mubvunzo, ndezvipi zvingave zvinodiwa kune PC?
Izvo zvinosiyana zvakanyanya, KDE inogona kumhanya zvakakwana paNetbook ine 1GB ye RAM uye Atom se processor. Saka zvinoenderana nehardware yauinayo.
Iyo nyowani KDE interface inoenda zvakanaka kwazvo neNitrux (KDE) + TYPE [: ZERO] icon suite. Zvakaipa ivo havana kusununguka.
Ndakaedza kde uye sezvinhu zvishoma muhupenyu, ndine chokwadi neizvi: Ini handidi KDE zvachose, ndiri pro-gnome
senge kde, ini handidi gnome futi. Ndiri pro-XFCE. Asi inyaya yekuravira.
elav Ini pachangu ndinoda dhizaini yePlasma 5. Zvisinei, nekuda kwenyaya yekugadzikana. Kugara kwangu mu KDE 4 kunoenda kwenguva yakareba ... Kana zvirinani kusvikira yakagadzikana vhezheni yePlasma 5 yabuda.
Panguva ino ndinonzwa ndakasununguka neKDE 4. Saka ini handisi mukumhanyira kuedza Plasma 5.
Kunyangwe kuzviedza. Ini ndinofunga ndaizoisa kopi nyowani yeLinux Mint ne KDE pane yechipiri hard drive. Saka kana chimwe chinhu chikakundikana muPlasma 5 ini ndaizorasikirwa zvachose hapana 🙂
Ini ndinofunga zvakafanana. Ini ndinofunga ndinonamira ne KDE4 kwechinguva, asi ini ndanga ndichiri kuyedza Plasma5 pane imwe PC. 😉
Ini ndiri mushandisi wembeva, asi ini ndakawana 3gb Intel i4 komputa, KDE ichaita sei nemuchina uyu?
Ndatenda nemhinduro dzako 🙂
Sesiriki shamwari yangu
Pindura kuna frikilui
Ini ndinayo pane Intel Core i5 uye inomhanya chaizvo 🙂
Ndakazviedza muFedora uye ndakazviona zvichiri zvakasvibira.
Iyo haina macomputer emifananidzo uye haina nzira yekuisa (hapana mashoma mabhokisi eaya) Izvi hazvina kunaka kana iwe uchida kukunda pamusoro petsika mushandisi.
Mafomu ekutanga akashaikwa muQt5, senge Dolphin, konqueror, nezvimwe. Ini handidi iyo spawn hybrid iyo inogona kuumba pakati kof 4 ne5
Iyo KDE yekudzora nzvimbo ichiri kushayikwa yakawanda yekumisikidza module Haikwanise kumisikidza purinda, semuenzaniso.
Zvikumbiro hazvigone kudzikiswa kubha yekuzivisa.
Zvichiri kushomeka kwemisoro yakawanda, kunyangwe ichi chiri chidiki pane matambudziko.
Zvisinei, ini ndanga ndichimhanya neyangu yechinyakare KDE4, uye kana iwe uchida kuiisa nekukasira ndinovimba watanga wagadzirisa matambudziko aya kutanga kana kumbosiya sarudzo yekushandisa KDE4.
Uye ichi ndicho chiitiko changu chete ne KDE5 paFedora. Pamwe mune mamwe ma distros zvakasiyana, asi kune chikamu chikuru ini handifunge kuti chakatsauswa.
lucas nhema akadaro
Ichokwadi icho chinogona kupihwa nekuvandudzwa kwemahara software. Kunyangwe zvine chekuita nemamiriro akajeka…. Ndingadai ndakakoshesa iyo gnome uye kde kufunga zvakanyanya kunge windows (kana zvichikwanisika). Iye zvino 1 gore rapfuura ndinoshandisa xfce4. Kutanga ndakaisarudza nekuti PC yangu yemazuva ese yakaderera-zviwanikwa, asi ipapo ndakaramba ndichisarudza nekuti ndiyo yakagadzika uye yakagadziriswa desktop paradigm, sezvazvaive muWindows XP. Ini ndinotenda, uye kwete chete kubva pane zvandakaona, kuti vashandisi veGNU / Linux (kwete vese, asi vangangoita vazhinji) havadi kutenderera makore ese maviri vachitarisa kana iro bhaa rebasa rinoratidza izvo zvatinoda kana mabhatani ari pano mangwana variko uko, kana kana mapaneru ekudzora nhasi ari imwe nzira uye mangwana imwe. Plasma (kde 2) inotaridzika zvakanaka, ehe. Inotaridzika inokwezva, hongu. Asi isu tiri nemabhora akazara izvo nekuda kwe «graphic shanduko» iyo desktop uye notebbok isingade, zvese zvinoshanduka, uye zvinoshanduka, uye zvinoita kunge hazvichinje nekukura.
Ini ndinofunga zvakanaka kuti maapplication anowana kumhanyisa uye madhiraivha anoshanda zvirinani uye zvirinani pamwe nebhutsu kumhanya uye kernel uye zvese izvi zviine zviwanikwa zvakafanana sepakutanga. Izvo zvinoshamisa zvemahara software .. asi ndapota !! usasvetuke kutenderera nemagariro enharaunda.
Ndinofunga ndinotaura ndichimiririra vazhinji. Kwazisai vanhu.
Pindura lucas nhema
Dj chikepe chakapunzika akadaro
Chinyorwa chakanaka! Ichokwadi icho chiri pamusoro, chinotaridzika zvakanaka. Kusafungisisa kwangu pamusoro peshanduro dzichangoburwa dzemhuri yeUbuntu, kwave kuri kwekunyanya kudzvinyirira pamwe neyakaomarara. Ini ndinofungidzira kuti izvi hazvingaratidzike chaizvo nechiedza ...
Pindura Dj Naufrago
Mhoroi ndanga ndichiyedza mwedzi wapera ma distros akati wandei ini ndaida Linux Mint 17.1 chete kuti chimwe chinhu musinamoni chandisina kunyatsofarira ndakaenda ku fedora 21 asi pakanga pachine chimwe chinhu chisina kunditendera kuti ndifare, ikozvino ndakaedza kubuntu 15.04 Ndiri kunakidzwa idesktop rine zvese, iyo aesthetics yakanyatso chenjera uye inonzwisisika Dolphin inoita kunge inoshamisira kwandiri ndine zvese zvandinoda ndiri padyo, chinhu chega chisina kundishandira zvakanaka kubatanidzwa ne droopbox uye mune kMenu kwazviri inoti nyora kutsvaga ndakanyora Terminal kana konsole uye hapana chinotsvaga ndinovimba vanoigadzirisa (handizive kana izvi zvikaitika kune mumwe munhu), asi zvikasadaro ndinofunga kuti pano ndinogara KDE5 ndakavhunduka kubva pakutanga kusvika pakupedzisira
Ini handizive zvavakaita asi ini ndichangobva kuvandudza paArch uye inomhanya chaizvo, iyo desktop mukati yaive ichizvibata nekukurumidza, pamwe neine lag (inogamuchirwa), ikozvino lag yacho yapera zvachose.
Kwakanaka basa kubva ku KDE timu.
Ini ndanga ndichiedza Kubuntu 15.04 mazuva mashoma apfuura uye chokwadi ndechekuti ndaichifarira zvakanyanya, ndinobvuma kuti handisati ndambove mafeni eKDE kupfuura chero chinhu kune ayo aesthetics, asi ndinofanira kujekesa kuti KDE ine yakanakisa kunyorera seDolphin , Okular, K3b kungodudza mashoma. Kunyangwe ichidya yakawanda yakawanda RAM kupfuura Xubuntu, pane yangu yekare PC (AMD64x2 ine 4gb ye RAM uye yakabatanidzwa NVIDIA kadhi) iyi vhezheni inomhanya chaizvo mushe, rakanakisa basa
Ndakaedza kuiswa kwakachena kwe15.04, uye ini handitore iyo Nvidia GS7300 kadhi yemifananidzo. zvinonyadzisa ...
Pindura kuna osky027
Kwayedza Kubuntu 15.04, yakanaka kwazvo KDE, asi haina kukwanisa kushanda neiyo desktop, kuwanda kwakawanda. Ini ndakazopedzisira ndaibvisa, ndikadzokera Kubuntu 14.10.
inoita kunge windows 8 🙁
Zvakanaka maererano nemifananidzo, mashandiro uye kutanga kunoenda zvakanaka, chinhu chega chandinoona kukundikana ndechekuti ruzha runofanira kugadziridzwa pese pandinopinda muhurongwa uye handizive kana paine faira rinogona kuchinjwa kuti ndirege ' t ndinofanirwa kuzviita pese pandinovhura kana kutangazve pc. Jagi rangu rine 2.5Ghz dual core amd athlon processor, 4GB RAM, kadhi rakasanganiswa kadhi uye 1Gb Ati kadhi revhidhiyo.
Mhoroi, ini ndoda kutaura maonero angu ekuzvininipisa, kunyange ndichi bvumirana zvakanyanya nemunyori wenyaya, ini pachangu handingakurudzire plasma 5 parizvino, ndinotenda nemoyo wese kuti inoda kugadzirisa mamwe matambudziko anogona kunge ari maronda echitsitsinho mukati meakasiyana mamiriro edesktop.
Ndakaita bvunzo paKubuntu 15.04, iyi yakaiswa pane HP Brand Laptop, Model 420, ine 2GB RAM uye ini ndinoona zvinotevera:
Kumhanya: Kunyangwe bvunzo Laptop yakaganhurirwa ini ndakaona kuti Kubuntu inoshanda nekukurumidza zvakanyanya zvine hukama nehama yayo Ubuntu 15.04 yakaiswa paComputer imwechete.
Dhizaini: Pasina kupokana iyo ndeimwe yeakanakisa magadzirirwo ayo zvirinani zvandakaona, sekutaura kwemunyori zvinoonekwa kuti maKDE geniuses ainetsekana zvikuru nezvenyaya iyi, sezvo zvichionekwa kuti yakachena uye inonaka desktop.
Hofisi otomatiki: senguva dzose LibreOffice, hapana chekutaura kunyangwe libreoffice ichishaya zvishoma kuti ikwanise kudarika Hofisi yeMicrorobo, mumaonero angu ndiyo yakanakisa imwe.
Mutungamiri wega: hapana chekutaura Kontact ini ndinofunga ndiyo yakanakisa mumunda wayo, uye zvine mwero chirongwa ichi chakazvipa icho basa rekubatsira kupfuura Outlook kana Thunderbird pachayo….
1.- Zvinodhura zvishoma kuti uzvigadzirise sezvo nekutadza inouya neBrize theme, yakaipa ipfungwa, kunyangwe isina kukosha inogona kutsamwisa.
2.- Amarok, pachangu handisati ndamboifarira kubvira pandinoiona ichinyongana kuti kana tichifanira kubvuma kuti ndiyo yakagadzikana ...
3.- rekodhi rakanyanya pane zvese nderekuti Kubuntu 15.04, iri kuita dambudziko rakakura nemifananidzo, kubvira zvadzimira screen, uchiona mune mamwe mablog ndiwo musoro weKubuntu vanhu vasina kukwanisa kugadzirisa dambudziko iri kuti anogona kuva Achilles chitsitsinho chePlasma 5… sezviri pachena Fedora 22 akaita shanduko ndokuwana mhinduro diki padambudziko iri….
Muchidimbu, ndinofunga kuti Plasma 5 iri kuzopa zvakawanda zvekutaura nezvazvo asi mumwedzi yakati wandei kana zvirinani kana Kubuntu 16.04 ichibuda (kana ikabuda), nekuti pamwe mune imwe yeayo inoenda zvachose kubva kuUbuntu zuva iro, ndiani anoziva ...
Mukupedzisira tine dzimwe nzira dzemahara dzinotibvumidza kuti tisashandise Robosoft 7 kana Robosoft 10 yechangu chikamu ini ndinosarudza kumirira kusvikira Kubuntu igadzikane neplasma 5 ...
Kujekeserwa: maonero angu anobva kumunhu ane ruzivo rwe 0 rwecomputer science, ini ndinongova mushandiwo zvake uye musango….
Ini ndinogona kungotaura kuti Windows inoyamwa !!!!
Kwazisai vese !!!
julius mejia akadaro
Pakupedzisira mumwe munhu akaita basa rechikoro uye kune iro ini ndinowedzera kuti vane dambudziko rekuziva iyo yekumberi odhiyo kuburitswa, kune avo vedu vane maPC epakombiyuta uye vanoshandisa mahedhifoni akabatana nemajack epamberi zvakakosha, ikozvino kana isu tichigadzirisa ne kmix iyo Inoziva asi kumisikidzwa kwakarasika mushure mekutanga komputa, kubhenekera pachiratidziro kunowanzoitika uye kunonetesa uye kunoitika kupfuura chero chinhu paunotarisa bhaisikopo kana kuteerera mimhanzi ine akati wandei mahwindo akavhurwa uye chimwe chinhu ndechekuti chimwe chinhu chine zvakaitika kwandiri kare mune mbiri nguva uye ndeyekuti iyo skrini yakasviba chose uye seye desktop desktop kana maneja maneja asi haibude kana kurega chero chinhu chichiita saizvozvo kumhanyisa kudzorera yangu yekare ine simba uye yakagadzika KUBUNTU 2 kubva kwandiri kugadzira izvi komenda izvozvi. Komputa yangu ine AMD ATHLON processor 14.10 × 2.5 Ghz x2 64 Gb ye RAM DD 4Tb, Graphics Radeon 1 4550GB RAM
Pindura kunaJulio mejia
Sezvo ini ndataura angangoita mazana mashanu mameseji kumashure, hahaha, ndakagadzirisa dambudziko rekumonyoroka nekuisa iro rakagadzikana AMD mutyairi wekadhi kadhi kadhi.
Eliud Gomez akadaro
Mhoro Shamwari kubva kuLinux: Ini ndaisa Kubuntu 15.04. Imwe yeSmplayer yako YouTube Browser application haishande kwandiri. Ini ndinokuudza, ini ndinomisikidza iyo tabo muSMplayer, mune sarudzo «tsvaga mavhidhiyo pane youtube, bhokisi rebhokisi rinowoneka rinoti: Kanganiso: Haikwanise kubatanidza kune youtube server. Unogona kundibatsira kugadzirisa dambudziko iri? Ndichazvikoshesa zvikuru. Ndinovimba mhinduro yako.
Pindura kuna Eliud Gómez
6 maficha anofanirwa kuve nemumhanzi wako